Maitiro ekuisa Firefox paRaspberry Pi | Mahara emahara
Maitiro ekuisa Firefox paRaspberry Pi
Vazhinji vedu vanoshandisa Raspberry Pi se minipc tichava neRaspbian yakaiswa pane yedu Raspberry Pi. Iyo ine simba yekushandisa sisitimu inoenderana chaizvo neiyo Raspberry Pi, asi ine zvayakanakira. Imwe yacho isoftware inouya yakaiswa.
Raspbian's web browser ndiGoogle Chromium, bhurawuza rakanaka asi kwete iyo Mozilla Firefox iyo vazhinji vedu yatinoshandisa zuva nezuva.. Ndosaka tichizokuudza maitiro ekuisa yazvino vhezheni yeMozilla Firefox pane yako Raspbian.
1 Mozilla Firefox 52 ESR Kuisirwa
2 Kuisa Mozilla Firefox 57 paRaspbian
3 Kuisa Mozilla Firefox 58
Mozilla Firefox 52 ESR Kuisirwa
Kuisa Firefox paRaspbian kuri nyore, isu tinongofanira vhura terminal uye nyora zvinotevera:
Kuisa Mozilla Firefox 57 paRaspbian
Asi izvi zvichaisa iyo ESR vhezheni, yakasimba kwazvo yakareba rutsigiro vhezheni asi kwete nekukurumidza seFirefox 57, inozivikanwa Firefox Quantum. Kana tichida iyi yazvino vhezheni isu tinofanirwa kuita zvinotevera. Kutanga tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kune iyo faira inovhura tinowedzera zvinotevera:
Isu tinoichengeta, vhara iyo faira uye nyora zvinotevera:
Mushure mekuisa iyi vhezheni, inova Mozilla Firefox 57, tinonyora zvinotevera zvakare mune terminal:
uye isu tinosiya iwo mutsara watinowedzera seinotevera:
Isu tinochengetedza shanduko uye tinobuda mufaira. Iye zvino tine Mozilla Firefox 57 iyo isiri iyo yazvino vhezheni asi yakatsiga uye inokurumidza kupfuura iripo.
Kuisa Mozilla Firefox 58
Uye kana tichida gadza Mozilla Firefox 58, isu tinongofanira kuenda webhusaiti yekurodha, dhawunirodha pasuru yacho neshanduro yazvino. Isu tinosunungura iyi package uye tinogadzira yakananga kupinda kune iyo faira «Firefox», tinobaya kaviri pane iyi yekuwana mukana uye tichava neazvino vhezheni yeFirefox inomhanya pane yedu Raspbian.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Maitiro ekuisa Firefox paRaspberry Pi
pandinonyora wekutanga kuraira «1
apt-tora kuisa firefox firefox-esr-l10n-en-es
zvinondiudza kuti iyo yekukiya faira / var / lib / dpkg / lock-frontend - open haigone kuvhurwa (13: mvumo yakaramba)
Desktop Metal patent tekinoroji nyowani yekugadzira zvinotsarukana
Utah inoshongedza maSWAT ayo neeprinta e3D